ICosta Dorada-Yintoni ongayibona kunye nento onokuyenza kwiholide yakho elandelayo | Iindaba Zokuhamba
Ukuhambahamba ngeCosta Dorada: Yintoni ongayibona kunye nokwenza
USusana godoy | 08/04/2021 11:03 | Iindawo zokutyelela
Ungathanda ukuthatha uhambo olukhulu ngeCosta Dorada? Yenye yezona ndawo zaziwa kakhulu kwijografi yaseSpain kwaye yenye yezona zinomdla. Ime emazantsi-ntshona eBarcelona kwaye ineelwandle ezingapheliyo kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezenza umdla ngakumbi, ukuba kunokwenzeka.
Kodwa kuyinyani oko Lo mmandla ungaphezulu kweelwandle kwaye ke, indlela yenkcubeko, egcwele amabali kunye neentsomi, nazo zisondela ngaye. Ke ngoko, awungekhe uphulukane nayo yonke into onokuyindwendwela kunye nento onokuyenza xa useholideyini. Uya kuba nayo yonke ezandleni zakho! Ngaba ukulungele ukuyonwabela?
1 I-Tarragona, yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokuqala eCosta Dorada
2 Ukuhamba ngeelwandle zayo
3 Indawo yokuhlala okanye inkampu?
4 Ukutyelela ipaki yomxholo weSalou
5 Ubomi bukaGaudí eRus
6 Sihamba ngeNdlela yeCistercian!
7 Zulazula kwi-Ebro Delta
I-Tarragona, yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokuqala eCosta Dorada
Kukho iindawo ezininzi ezigutyungelwe yiCosta Dorada, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, iTarragona ithatha indawo yokuqala. Singatsho ngaye ukuba Ijongeka njengemyuziyam evulekileyo emoyeni, enkosi kuyo yonke into ekufuneka isibonisile kumanxiwa ekuthiwa ngamanxiwa eTarraco. Siza kuthatha amanyathelo ambalwa ukubuyela emva ngexesha lokufumanisa iibhlorho, iinqaba ezinje ngeeScipios kunye nodonga lwayo oludala, olungabuyeli kumaxesha amaRoma. Konke oku kuyenye yezona ndawo zibalulekileyo zezinto zakudala, ezinamatye anqabileyo okwenyani, ekufuneka aziwe. Ukongeza koku, awunakuphulukana notyelelo lwakho kwiCathedral yaseSanta Tecla, iMirador del Mediterráneo okanye iZibuko.
Ukuhamba ngeelwandle zayo
Sihambile ekuhambeni ngexesha sibuyele kulo ngoku saza safumanisa zonke iilwandle. Kuba yindawo apho i-sandbanks iya kuhlala ikhona, idityaniswe nalawo makristalline amanzi awathandayo kakhulu. ILa Pineda lolunye lolwandle olugqibeleleyo, ngaphezulu kweekhilomitha ezimbini ubude apho unokuziqhelanisa nokuntywila emanzini okanye ukuntywila. ICala Fonda, ekwabizwa ngokuba yiWaikiki, imi kumantla eTarragona kwaye yenye yezona zithuleyo. Ngelixa iSantes Creus Beach, apho iimbono zayo kunye nokubonakaliswa kolwandle, kuya kukuchukumisa. Ukuchitha usuku nosapho kwaye ujikelezwe ngamahlathi ompayini yiCap Roig Beach.
Indawo yokuhlala okanye inkampu?
Ubumnandi bohambo ngamanye amaxesha buqala ngendawo yokuhlala ebesiyikhangele. Kuba ukuba sithetha ngeelwandle ezenza le ndawo, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, ngeenkcukacha ezinkulu, ziya kuba ngabakhokelayo. Kodwa ukuba ufuna ukukhangela into eyonga ngakumbi, esebenzayo kunye nosapho lonke, unokukhetha i- Ukumisa inkampu eCosta Dorada. Ngale ndlela uyakuhlala ukwindawo ezolileyo kwaye, ewe, unokuyonwabela indawo esemaphandleni kunye nolwandle xa uziva uthanda nazo zonke iinkonzo ezikufutshane.
Ukutyelela ipaki yomxholo weSalou
Kungenxa yokuba ukongeza kumanxweme kunye nokhenketho oluninzi, uSalou unayo IParkAventura Ipaki yomxholo wehlabathi. Ke inokuba lolunye lotyelelo olungaphezulu kokunyanzelwa, ngakumbi ukuba uhamba nabantwana bakho. Kungenxa yokuba ngale ndlela unokonwabela zonke izinto ezinomdla njengentsapho kwaye kubo kuya kuba yinkuthazo. Ewe, iSalou ikwabonelela ngeendawo ezikhethekileyo njengenqaba iTorre Vella, ukuba ufuna ukonwabela eyona ndawo inenkcubeko.
Ubomi bukaGaudí eRus
Awunakuphulukana nokuhamba ngeReus, njengoko ingumbala waseGaudí kunye nako konke oko kubandakanya. Kuba iminyaka eliqela wayehlala kule ndawo kwaye namhlanje sisikhumbuzo esihle somculi, kwikona nganye nganye. Ungonwabela ukuba yayiyintoni ikhaya lakhe kunye neZiko laseGaudí, eliliziko lokutolika elisePlaza del Ayuntamiento. Kuyo unokufumana izinto zobuqu zomzobi, kwaye kukho igumbi elinemveliso yomsebenzi wakhe.
Sihamba ngeNdlela yeCistercian!
Yindlela ongayenza ngeenyawo okanye ngebhayisekile ukuba uziva uthanda kakhulu. Kule ndlela unayo iindawo ezintathu zokumisa ezinyanzelekileyo ezithi zibe ziindawo ezintathu zoonongendi: iVallbona, iPoblet neSantes Creus. Indawo egqibeleleyo yokufumana ubutyebi bayo bokwakha, obucacileyo, kodwa nakwigastronomy kwaye kunjalo, kubugcisa. Yiyo loo nto lolunye lolo khetho xa sityelele iCosta Dorada, zikwoluhambo lwethu.
Zulazula kwi-Ebro Delta
Ukutyelela ipaki ye-Delta del Ebro yenye yeendawo ezisisiseko ukucingela. Kuba kuyo uya kufumanisa iintlobo ezininzi zezilwanyana. Kodwa ikwabonelela ngamanye amava amnandi onokonwabela kwaye uwakhumbule bonke ubomi bakho: Uhambo ngesikhephe nge-Ebro Delta. Ewe, unokufikelela emlonyeni womnye wemilambo ebaluleke kakhulu, wonwabele indalo kunye neelwandle zayo. Unemizila ejikeleze iyure, ukuya kuthi ga kusuku. Yeyiphi indawo oza kuqala kuyo iholide yakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo zokutyelela » Ukuhambahamba ngeCosta Dorada: Yintoni ongayibona kunye nokwenza